Innovation na-abịa ụgwọ. Uber na-emetụta ụlọ ọrụ tagzi n'ụzọ na-adịghị mma. Igwe redio intanet na-emetụta redio na egwu na mgbasa ozi ọdịnala. Vidio a na-achọ na-emetụta ihe nkiri ọdịnala. Mana ihe anyị na-ahụ abụghị nyefe nke ina, ọ bụ ọchịchọ ọhụrụ.
Ana m agwa ndị mmadụ mgbe niile na ihe na-eme abụghị otu ụlọ ọrụ na-egbu mmadụ ọzọ, ọ bụ naanị na ụlọ ọrụ ọdịnala dị mma na oke uru ha ma jiri nwayọ na-egbu onwe ha. Ọ bụ oku na ụlọ ọrụ ọdịnala ọ bụla na ha ga-etinye ego na teknụzụ ọhụụ ma ọ bụrụ na ha nwere olile anya na agaghị achịkwa ha n'ikpeazụ.